Taariikhda My Butros » Booqashada Key West, Florida la xayawaankaaga
Last updated: Feb. 17 2020 | 2 min akhri
Waxaa laga yaabaa in City Butros friendliest ee Maraykanka!
Key West, mararka qaarkood loo yaqaan Jamhuuriyadda Conch ka, duni tan u gaar yahay. Waxay ku taallaa meesha ugu fog Furayaasha Florida ee, waxaa hubaal socod inuu garaaco of durbaan garaace ka duwan.
Haddii aad raadinayso jawi caadi ah, meeshan waa sida ugu fiican ee ay ishu. Iyo qurux meel walba keentaa aad eegto ka buluug biyaha sumurud / cagaar ah u Qorrax ka holcaya in ubaxyadii Hibiscus hooyo in loo maro hay'adaha Furayaasha xusid mudan. Meeshu waa sida no kale ee caalamka.
Laakiin ka sii muhiimsan noo safraya milkiilayaasha xayawaanka, meeshan waa sida xayawaanka Friendly sida ay ishu.
Waafajin intooda badan in Key West waa nooca yar yar, Jamciyadood yar, sariir iyo quraac, cariishyada iyo sida. Maxkamadda Key Center West ee – Taariikhi ah Inn & Cottages waa tusaale kaamil ah oo xayawaanka u cayimaysaa saaxiibtinimo in laga helo Key West.
Xarunta Maxkamadda waxay bixisaa soocaya, gaarka ah, Qolalka raaxo leh oo la awoodi karo, shidmaan, Villas, condos iyo cariishyada, tallaabooyinka ka Duval Street. Intooda badani waxay leeyihiin Jacuzzis gaarka ah getaways jaceyl ama xataa pool gaar ah! Xayawaanka jira in ka badan soo dhawaynayaa, ay caabuday! Weydiiso dawayn gaar ah ugu dul hubinta in aad saaxiib afar lugood ah.
Your xayawaanka waxaa laga yaabaa doonayaa inaan u ciyaaro mid ka mid ah afarta eeyaha degan in dhammaan waa sida dib u dhigtay sida Key laftiisa West.
Shaqaalaha saaxiibtinimo iyo aqoon u qaban doona shaqo adag si aad joogtid dheeraad ah oo farxad leh. Riix www.centercourtkw.com u aragto website-.
Qaadashada hamineysa leh xayawaankaaga lama ay noqon doontaa dhibaato. Key West ma aha wax ka badan dersin blocks jiho kasta oo waxaa loogu tala galay strolling iyo dadka daawashada. Dad badan ayaa guryahooda jir soo celiyo, Dukaamada, fannaaniin, parks, wax walba oo aad rabto inaad aragto, iyo xayawaanka guriga soo dhawayn doonaa inay socoto doonaa.
Xitaa qadeysaa in Key West waa xayawaan ku yeeshaan amarkooda, saaxiibtinimo. Dhinacyada wadada Duval tahay dersin makhaayadaha meesha xayawaanka la soo dhaweyn doonaa oo la siiyo daaweynta khaaska ah. Your editor waxaa jiray dhawaan la eey uu xayawaanka, Ruggles. Waxaan ay lugeynayeen in mid ka mid ah xayawaanka kuwa saaxiibtinimo Makhaayadood / makhaayadaha, oo waxaynu ku maraya makhaayad ah qatarsanaa Faransiiska iyo hubiyaa baxay menu. Baaritaan la sameeyay in Ruggles lagu soo dhaweyn doono. Jawaabtu ahaa, “Uu jeclaan lahaa besteeki ama digaag?”
Si aad u aragto oo dhan oo ka mid ah goobaha soo dhawaynta ee xayawaanka in ay sii joogaan iyo in la cuno Key West kaliya aado www.pettravel.com/Destinations/KeyWest_FL.cfm.
Haddii aadan ku nool Florida, ay u badan tahay inuu u duulo galay garoonka diyaaradaha Miami aad.